सन्तोष देउजाको घरमा के हुँदैछ र यस्तो ? हेर्नुहोस् भिडियो – Sandesh Press
June 13, 2021 696
सन्तोष देउजाको घरमा के हुँदैछ र यस्तो ? पत्नि देवर र आमाबिचको कुराकानी बाहिर आयो, सबैको घर मिलाउँदै हिँड्ने सन्तोष्कहाँ के हुँदैछ
साथै यो समाचार पनि हेर्नुहोस पढ्नुहोस्ने
पाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई छुट्टै शेयर निष्कासन तथा कारोबार गराउने गृहकार्यलाई अन्तिम रूप दिँदै छ। बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारको माध्यमबाट पूँजी जुटाउन र कारोबार गराउन भन्दै छुट्टै प्लेटफर्म निर्माणमा अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको हो।
उसले चाँडै बोर्ड समक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम सकाएको अध्ययन कमिटीका संयोजकले जानकारी दिएका छन्। “हामीलाई साना तथा मझौला कम्पनीहरुको प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारमा कसरी कारोबार गराउन सकिन्छ ? त्यसको सम्भाव्यता, आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र त्यसको कार्यान्वनकालागि गर्नु पर्ने कार्यको पहिचान गर्न जिम्वेवारी दिइएको थियो।
जसलाई हामीले निकै मेहनतका साथ अध्ययन गरेका छौ। जुन लगभग सकिएको छ” अध्ययन कमिटीका संयोजकले मेरो लगानीसँग भने।उनका अनुसार रिपोर्टमा सबै बिषय समेटिएको छ। उक्त रिपोर्ट कै आधारमा बोर्डले उक्त कार्य अघि बढाउन चाँडै निर्देशन दिने तयारी समेत गरिरहेको संयोजकको भनाई छ।
उनका अनुसार बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई छुट्टै कारोबार गराउन सक्ने गरी छुट्टै कारोबार सेक्सन निर्माण गर्न निर्देशन दिने छ। बोर्डको निर्देशन अनुसार नियमित कारोबारमै साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबार गर्ने नयाँ सेक्सन नेप्सेले निर्माण गर्ने छ।
नेप्सेले कारोबार गराउने फिचर मात्रै थप्ने छैन उसले साना तथा मौला कम्पनीहरूको सूचीकरणको पनि छुट्टै व्यवस्था गर्ने छ। साना कम्पनीहरूले सूचीकरणको लागि शुल्कदेखि मापदण्ड समेत स्टकले निर्धारण गर्ने छ। उसले तोकेका मापदण्ड पुर्‍याउने कम्पनीहरूलाई स्टकले सूचीकरणदेखि कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने छ।
दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार गरे जस्तै गरी लगानीकर्ताले साना कम्पनीको शेयर किनबेच गर्न सक्ने छन्। बोर्डले दोस्रो बजारको जिम्मेवारी नेप्सेलाई दिने छ भने प्राथमिक निष्कासनको जिम्मेवारी भने आफैले तय गर्ने छ। साना कम्पनीहरुकोलागि प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने मापदण्ड बोर्डले नै निर्धारण गर्ने छ। निर्धारण गरेका मापदण्ड पुर्‍याउने कम्पनीहरूलाई प्राथमिक बजारबाट पूँजी सङ्कलनको अनुमति बोर्डले दिने छ।
Prevपोखरीमा डुबेर पाँच बालिकाको मृत्यु
Nextनर्भिकमा उपचाररत अभिनेत्री निशालाई करिष्मा मानन्धरको यति ठूलो सहयोग !